It is me. Ko Niknayman.: 2007
Posted by Ko Niknayman at 9:54 AM Links to this post
Talky ကျော်စိုး (ကိုကျော်စိုး) ကို ၂၇ ရက် ညပိုင်းက သီးသန့်ဆောင် မှ ပင်မဆောင်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အဖမ်းခံရစဉ်တွင် ခေါင်းတွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် အာရုံကြော ထိခိုက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကိုကျော်စိုး အပါအ၀င် (၆) ဦးမှာ ပါဆယ်သာပေးနိုင်ပြီး လူချင်းမတွေ့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ငွေကြာယံ ဆရာတော် (၅) ပါး (ဦးနန္ဓ ၊ ဦးဇာနည်ရ ၊ ဦးအဂ်ဂဓမမ ၊ ဦးအိမ်သရိယ ၊ ဦးလာသက) တို့ကို ပုဒ်မ - ၅၀၅/ခ ၊ ၂၉၅ ၊ ၁၄၃ နဲ့စွဲဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ကိုလှမျိုးနောင်ကိုမူ ပင်မဆောင် ဆေးရုံတွင်ထားရှိထားသော်လည်း၊ ဆေးကုသမှုမှာ ညံ့ဖြင်းလွန်းကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(၂၆) ရက်နေ့က ရှေ့နေချုပ်များ၊ တရားသူကြီးများ အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး၊
ဖမ်းဆီးထားသူတော်တော်များများအား ရုံးမထုတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး နှင့် ကိုဌေးကြွယ်တို့ မှ မိမိတို့ ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်မှာ (၄)လ နှင့် (၈)ရက် (ရက်ပေါင်း ၁၃၀) ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ အရ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း တရားစွဲဆိုရမည်ထက် ပိုမိုကျော်လွန်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်း။ ထို့ အတွက်ကြောင့် မိမိတို့ ကို တရားမစွဲဆိုပါက မိမိတို့ ၏ မိသားစုများမှ န.အ.ဖ ကို ပြန်လည် တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ ကို တရားစွဲဆိုမည်ဆိုပါက - ပြည်သူလူထု ရှေ့မှောက်တွင် စစ်မှန်သော တရားနည်းလမ်းကျစွာဖြင့် စစ်ဆေးပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ စစ်အုပ်စုနအဖ၏ ထုံးစံအတိုင်း မမြင်ကွယ်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါက မိမိတို့ အနေဖြင့် မည်သည်ကိုမှ လုံးဝ လက်မှတ်ရေးထိုးမည် မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်။
သီးသန့်ဆောင် နှင့် ပင်မဆောင် မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးများအား ရေချိုးချိန်မှလွဲလျှင် အပြင်ထွက်(အဆောင်ပြင်) ခွင့်မရကြောင်း၊ ထင်ပေါ်သည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များမှအပ ဖမ်းဆီးခံနေရသော ကျန်လူငယ်အများစုအား စစ်ကြောရေးစခန်းများတွင် ရိုက်နှိုက်ညှင်းပန်းမှုများရှိနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 9:04 AM Links to this post
စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုအား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်နေပုံများကို ရိုက်ကူးထားသည့် ဗီစီဒီ အပါအ၀င် နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်များအား ဖုန်းဆက်သည့် လှုပ်ရှားမှုနှင့် တအိမ်တက်ဆင်း စာဝေသည့် လှုပ်ရှားမှု များကို စက်တင်ဘာ လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားလူငယ်များက ယမန်နေ့မှ
တအိမ်တက်ဆင်း ဝေသည့်စာတွင် မိမိတို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ကြရန် မေတ္တာ ရပ်ခံထားပါသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ (လွတ်လပ်ရေးနေ့) တွင် နေအိမ်မှ အပြင်မထွက်ကြရန်၊ ထိုနေ့မှစ၍ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ တပတ်တိတိ ရုံးမတက်ကြရန်တို့ကို တောင်းဆိုထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးနှင့် တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ဟု ရေးသားထားကြောင်း စီစဉ်သူများနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ အပါအ၀င် မန္တလေး၊ ပခုက္ကူ၊ မုံရွာနှင့် ဘိုကလေးမြို့များတွင် စာဝေသည့်လှုပ်ရှားမှုကို ယနေ့ ဆက်လက်ပြုလုပ် နေကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 8:58 AM Links to this post
ဓါတ်ပုံကို မိုးမခမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း
Posted by Ko Niknayman at 6:24 AM Links to this post
ရွှေတိဂုံဘရားမှာ သန်းရွှေကျောက်စိမ်းဘုရားတစ်ဆူ ကို လှူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘုရားပုံတော်ကို သူ့ မျက်နာနဲ့ တူအောင်ထုထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘုရားကို လူတွေကန်တော့သလိုမျိုး သူ့ ကိုလူတွေက ကန်တော့အောင် မပုန်ကန်ရဲအောင်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘုရားရုပ်ပွားတော်က ဥာဏ်တော် ၁ဒသမ ၅ မီတာမြင့်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရား တောင်ဖက်မုဒ်အခြမ်းမှာရှိပါတယ်။ သတင်းအပြည့် အစုံကို အောက်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖတ်ရူနိင်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို အင်တာနက်မှတဆင့်ရရှိလို့ အများပြည်သူများသိရှိရန် တင်ပြပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 8:40 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 8:39 AM Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ တရားဟောဆရာတော် ၅ ပါးအား စစ်ခွေးများနှင့် ၄င်းတို့၏နောက်လိုက်သာသနာဖျက် ဒေ၀ဒတ်မျိုးနွယ် လက်တစ်စုပ်စာလူတစ်စုက တရားပွဲကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်သည် ဟူသော သတင်းဆိုးတစ်ခုကို ယနေ့နံနက်တွင် ကြားသိလိုက်ရပါသည်။
ယနေ့နံနက် မြောက်ဥက္ကလာပရှိ တရားပွဲစီစဉ်သူ တာဝန်ရှိသူများအား စစ်ခွေးနောက်လိုက် အမျိုးဖျက် တာဝန်ယူထားပြီး မ.၀.တ (မ.ယ.က) ခေါင်းစဉ်တပ် စစ်ခွေးအလိုတော်ရိများမှ ခေါ်ကာ အထင်ကရ ဆရာတော်များထဲမှ ဦးကောသလ္လ( ဓမ္မစေတီ ) ၏ ဟောမည့်ရက် ၄.၁.၀၈ အတွက်တင်ထားသောတရားပွဲကျင်းပခွင့်အတွက် ခွင့်မပြုကြောင်းနှင့် ကျင်းပခဲ့ပါက တာဝန်အရအရေးယူ ဆောင်ရွက် ခြင်းခံရမည်ကို သိရှိပါကြောင်း ၀န်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ တရားပွဲပြုလုပ်ခွင့်ပိတ်ခံရသော ဆရာတော် မှာ ၅ ပါး ဖြစ်ပြီး ထိုဆရာတော်များ၏ ဘွဲ့များပါ၎င်းဝန်ခံကတိ၏ အထက်တွင် ပါရှိရာ ၄င်းဆရာတော် များ မှာ ဦးကောသလ္လ(ဓမ္မစေတီ) ၊ ဒေါက်တာ အရှင်ကောဝိဒ(မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်) ၊ ဖြူးဆရာတော်၊ အရှင်ဇဋိလ(လူရည်ချွန်) တို့၏ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များသာ တိတိကျကျတွေ့ရှိရပြီး ကျန် ၁ ပါးအားအတိအကျမမြင်တွေ့ ခဲ့ရဟု ထိုတရားပွဲတာဝန်ခံကပြောပြခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင်လွန်ခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလအတွင်း အင်းစိန် နှင့် ရွှေပြည်သာတို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောတရား ပွဲများကိုလည်း တနည်းမဟုတ်တနည်း နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် စစ်ခွေးနောက်လိုက်များက နှောက်ယှက်ခဲ့ကြပါသေးသည်။ ရွှေပြည်သာတရားပွဲတွင် သီတဂူကြယ်တပွင့်ဆရာတော်၏ တရားဟောသည့်ရက်၌ ကြိုတင်ကြောင်းကြားထားရက်နှင့် မီးဖျက်တောက်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာ မီတာရုံးသို့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားသော်လည်း မီးပျက်ရက်ဖြစ်၍မည်သို့မှလုပ်ဆောင်မပေးနိုင်ကြောင်း ခပ်မာမာနှင့်ပင် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်တော့ စစ်ခွေးတို့သည် ဗြောင်ကျကျပင် ဒင်းတို့၏ အလိုတော်ရိများအား ဆရာတော်များ၏တရားဟောပြောခွင့်ကိုပိတ်ပင်စေခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်လာပါတော့သည်။
Posted by Ko Niknayman at 9:13 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 4:17 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 11:43 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:51 AM Links to this post
သူ နာမည် က အတုံး ကောင် လို့အများက သိကြပါတယ်။ သူ သတင်းပေး လုပ်နေတာ ကြာပါပြီ။
တရုတ်လူ မျိူး အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျက် စိ တလုံး မှေးနေပါတယ်။ ရန်ကုန် ဘား လမ်း အပေါ်ဘလောက် မှာနေပါတယ်။ သူဟာ ဘား လမ်း က အလှ ပြင် ဆိုင်နာ မည် ခံတဲ့ အနှိပ် ခန်း တွေ မှာ ညဖက်ကို ပိုက် ဆံလိုက်တောင်းပါတယ်။ သူ့ညီ က ဘား လမ်း အလယ် ဆေး ရုံ ထောင့်မှာ မနက် ပိုင်းကို ခေါက် ဆွဲ ကြော်၊ ကြာဆံကြော် ရောင်းပါတယ်။ ဒီ အတုံးကောင်ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာက နံပါတ် (၂၄၁) ဘားလမ် အထက်ဘလောက် (ကျော်နိုင် TV ဆီုင် အပေါ်ထပ်) ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်မှာ ကျောက်တံတားရဲစခန်းကို အဓိကသတင်းပေးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် တစ်ယေက်က ကျောက်တံတား ရဲ စခန်းက. ဒု ရဲ အုပ် တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒုရဲအုပ်ဟာ ဘားလမ်းအပေါ်ဘလောက် မှာ နိုးတူး ဆို ပြီး အလှ ပြင် ဆိုင် နံမည် ခံ နဲ့အနှိပ် ခန်း ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒီအလှပြင်ဆိုင် (ခ) အနှိပ်ခန်းကို သူကိုယ်တိုင် မဦးစီးဘဲ မန်နေဂျာနဲ့ ထားပါတယ်။ ဒီ နိုး တူး အလှ ပြင် ဆိုင်ရဲ့လိပ် စာ က ၂၆၅-၂၇၅ ဖြစ်ပြီး၊ ဘား လမ်း အပေါ်ဘလောက်က ရှင် သန် ခြင်း TV ဆိုင် အပေါ် ထပ်က ဖြစ်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလအတွင်းက ပြည်သူတွေနဲ့ရဟန်းသံဃာတွေကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ သူတွေပါ။ ဒီလိုလောက်ကောင် သတင်းပေးတွေကို ထိုက်တန်တဲ့ အပြစ်ပြန်ပေးရပါမယ်။
Posted by Ko Niknayman at 7:37 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 11:59 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 11:26 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 9:11 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 4:25 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 10:44 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:05 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 5:46 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 8:14 PM Links to this post
အခု သူရောကျွန်တော်ပါ လုံထိန်းတွေရဲ့ ရွှေဘုံသာလမ်းနဲ့ သိမ်ကြီးဈေး အကြား ဖရေဇာလမ်းပေါ်မှာ ဆန္ဒပြနေသူတွေကို တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက် ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးမှုကနေ လွတ်မြောက် လာခဲ့ကြတာပါ..နောက်နေ့တွေ ..နောက်နေ့နောက်နေ့တွေ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ..ဘယ်သူတွေကဆက်ဦးဆောင်မလဲ..နှစ်ယောက် သား ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာလေးလေးလံလံ လျှောက်နေရင်းနဲ့ မေးခွန်းတွေကြားမှာချောင်ပိတ်မိနေတယ်...
ကြည့်စမ်းပါဦး..ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံတဲ့ဗျာ...အရင်က ဆွမ်းခံကြွရင် သံဃာတော်ကအနည်းဆုံး အပါး ၃၀လောက်၊ ကိုရင်က ဆယ်ပါးလောက်ကြွနေုကျနေရာတွေမှာ အခုတော့ ကိုရင်ဆယ်ပါးလောက်နဲ့ သံဃာတော်ငါးပါးလောက်ပဲ ကြွတာတွေ့ရတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာအတွက်စိတ်တောင်မကောင်းဘူးဗျာ...ဘယ်လိုကပ် ဆိုးတွေရဲ့အောက်မှာ သံဃာတော်တွေကျ ရောက်ခဲ့တာလဲ....ကိုယ့်ဆွမ်းဒကာ၊ ဆွမ်းဒကာမအတွေအတွက် အစတေးခံသွားတဲ့သံဃာတော်တွေ ဘယ်နှပါးလောက်ရှိနေပြီလဲ...အခုဆိုရင် သံဃာတော်တွေကိုဆွမ်းလောင်းလှူဖို့ကိုတောင်မှ ဥပဒေပပြစ်မှုတစ်ခုလိုမ၀ံ့မရဲဖြစ်နေရတာတွေ...မင်းကွန်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာပို့အခွေ ကိုအသံအကျယ်ကြီးမဖွင့်ရဲတာတွေ...ဓမ္မာရုံမှာထောင်ထားတဲ့ သာသနာ့အလံကိုတောင် ရန်အရှာခံရတာတွေ..ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကို အစော်ကားခံရတာတွေ...ဒါတွေအားလုံးကို ဘယ်သာသနာစောင့်နတ်တွေဆီ တိုင်တည်တိုင်တန်းလို့ရနိုင်မလဲဗျာ.....
လူတွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ပခုက္ကူကိစ္စကတကယ်ပဲလား၊ ၁၇ ရက်နေ့ ရောက်လို့မှ အစိုးရဘက်က ဘာမှမထူးခြားရင်သံဃာတော်တွေဘက်က ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတာကရော တကယ်လား။ ၁၇ ရက်နေ့အထိကို လူတွေရင်ထဲမှာ တအုံနွေးနွေးနဲ့ စိုးရိမ်နေ ကြပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ သံဃာတော်တစ်ပါးတစ်လေ သူ့ကိစ္စနဲ့သူ ကြွသွားတာမြင်ရင်တောင်မှ လိုက်ကြည့်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးပါ။ ဒီဇဝေဇ၀ါဖြစ်မှုတွေ ၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေဟာ ၁၈ ရက်နေ့အရောက်မှာတော့ နေရောင်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ နှင်းထုတွေလို အကုန်ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပါတယ်။ သံဃာတော်တွေ ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်တဲ့သတင်းကို ၁၈ ရက်နေ့ညပိုင်းကျမှ ကျွန်တော်သိရတာ ပါ။ အင်တာနက်ပေါ်က စီတန်းလှည့်လည်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ကြက်သီးဖျန်းဖျန်း ထမိပါရဲ့။
၁၉ ရက်နေ့မှာလည်းသံဃာတော်တွေ စီတန်းလှည့်လည်ကြတယ်။ ဒီအချိန်အထိ ကျွန်တော့်မှာ မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ဖူးခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ အဲဒီ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမလိုအားမရဖြစ်မိ ပါတယ်။ ဆူးလေဘုရားနဲ့ ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာ မဝေးပေမယ့် သံဃာတော်တွေက ဆူးလေဘုရားလမ်းက နေကြွသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ဘာမှမသိလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀ ရက်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝသွားပါတယ်။ အဲဒီ့နေ့တွေက မုန်တိုင်းရှိလို့ နေ့လည် ပိုင်းလောက်ဆိုရင်မိုးရွာပါပြီ။ ဒီနေ့မှာလည်းမိုးကထုံစံအတိုင်းတဖွဲဖွဲကျနေပါတယ်။ အချိန်က ၃နာရီဝန်းကျင်လောက်ရှိပါပြီ။ အဲဒီ့အချိန်မှာပဲ သံဃာတော်တွေ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်ကနေ ဆူးလေဘုရား လမ်းဘက်ကြွလာတာကို တွေ့ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်း၊ အံ့သြတဲ့မျက် လုံးတွေ၊ ၀မ်းသာတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲတွေဖြစ်လို့။ မိုးရေတွေရွှဲစိုနေတဲ့ သံဃာတော်တွေဟာ ဘာကိုမှဂရုမထားပဲ လက်အုပ်ချီလို့၊ မေတ္တာပို့ကိုသာသံပြိုင်ရွတ်ဖတ်လို့ ကြွနေကြပါတယ်။ သံဃာတော်တွေရဲ့နောက်မှာတော့ လူကဆယ်ဂဏန်းလောက်သာလိုက်လာပါတယ်။ အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်စိုးခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေဟာ လောလောဆယ်မှာတော့ နောက်ကနေလိုက်ဖို့၊ လက်ခုပ်တီးပေးဖို့နေနေသာသာ လက်အုပ်ချီရှိခိုးဖို့ကိုတောင်မှ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ရှိုခိုးနေရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ သံဃာတော်တွေကိုကြည့်ရင်းမျက်ရည်လည်မိပါတယ်။(အခုစာရေးနေချိန်အထိလည်းပြန်တွေးပြီးမျက် ရည်လည်မိပါတယ်ဗျာ။) ရေစိုနေတဲ့သင်္ဃန်းအလေးကြီးတွေနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားနေလျှောက်လာရတဲ့ခရီး၊ တစ်နပ်တည်းသာရှိတဲ့ဆွမ်းအာဟာရနဲ့အဆက်မပြတ်မေတ္တာပို့ရွတ်ဆိုနေတာ ၊ ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ အတွက်မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။
၂၁ရက်နေ့လောက်ကစလို့ သံဃာတော်များရဲ့ လမ်းလျှောက်မေတ္တာပို့ပွဲတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းအရှိန်ရလာပါပြီ။ ပြည်သူတွေလဲတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့အင်အားပိုများလာပါတယ်။ ကျွန်တော် လဲ ဒီရက်ပိုင်းတွေကစလို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်မှာ သံဃာတော်တွေကြွလာသံကိုနားစွင့်နေပြီး သံဃာတော်တွေကြွလာပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ မြို့တော်ခမ်းမရှေ့ရောက်တဲ့အထိ အနောက်ကနေလိုက်အားပေးဖြစ်ပါတယ်။ သံဃာတော်တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ပြည်သူလူထုကြီးက သဘောပေါက်လာပါပြီ။
အနုပညာ နဲ့ စာပေသမား တချို့ရဲ့ တပ်လှန့်နှိုးဆော်သံကလဲ ပြည်သူလူထုကြီးကိုပိုပြီး အာရုံစိုက်မိစေပါတယ်။ သံဃာတော်တွေရဲ့အနောက်ကလိုက်ရုံတင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သံဃာတော်တွေရဲ့ဘေးကနေ လက်ချင်းကာရံချိတ်ပေးထားတဲ့အထိ နိုးကြားတက်ကြွလာပါပြီ။ လက်ချင်းချိတ်ပြီးလိုက်ပါနေတဲ့ လူထုဟာဆိုရင်လဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပါ။ ကွာတားဘောင်းဘီနဲ့ ဆံပင်အနီနဲ့ နားပေါက်နဲ့ လူငယ်တွေပါသလို၊ပုဆိုးနဲ့ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေလဲပါပါတယ်။ ထို့အတူပဲ မိန်းကလေးတွေနဲ့အဒေါ်ကြီးတွေ လည်းပါပါတယ်။
အသွင်အပြင်တွေ၊ ပုံသဏ္ဍာန်တွေ အမျိုးမျိုးကွဲနေပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ တစ်ခုပဲရှိမှာပါ။ တိုက်ပွဲရဲ့အရှိန်ကတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာပဲ သံဃာတော်တွေက ၂၃ ရက်နေ့အထိမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေမဖြစ်မြောက်ဘူးဆိုရ င် ၂၄ ရက်နေ့မှာ တပြည်လုံးမှာ လူထု နဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ မေတ္တာပို့ချီတက်ပွဲတွေ လုပ်မယ်လို့ တိုက်ပွဲအရှိန်ကိုတစ်ဆင့်ထပ်မြှင့်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲခေါ်သံက လူတိုင်းရဲ့ ရင်ကိုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်လို့ ညံသွားစေပါတယ်။ ညဘက်ဆိုရင် တကြွီကြွီ၊တဂွီဂွီနဲ့ နိုင်ငံခြားအသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေရဲ့ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို ဖမ်းယူနားဆင်နေကြသံကို နေရာတိုင်းလိုလိုမှာကြားလာရပါတယ်။ စလောင်းကလွှင့်တဲ့ ဒီဗီဘီ ရုပ်သံမှာလည်း သံဃာတော်တွေချီတက်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို လွှင့်ပေးနေပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုန်ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ နည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးစားမလား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားနည်းလမ်းသုံးမလား ။ တကယ်လို့ တခြားနည်းလမ်းသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းလဲ ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျည်ဆံသုံးမှာလား ၊ မသုံးဘူးလား။ ဘယ်သူမှမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့ကာလပါ။ လူတွေအားလုံး ဟာ ၂၃ရက်နေ့ ည ၈နာရီသတင်းကို ရင်ခုန် စွာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
၂၄ ရက်နေ့ရဲ့ မိုးကောင်းကင်ကတော့ အရင်နေ့တွေတုန်းကလိုပါပဲ။ဒါပေမယ့်လမ်းပေါ်မှာ တော့ အရင်နေ့တွေကလို မဟုတ်ပဲ ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်နေပါတယ်။ အခါတိုင်းနေ့တွေကတော့ ၁၂နာရီ ခွဲ ၁နာရီလောက်ကျမှ ရွှေတိဂုံဘုရားကနေ သံဃာတော်တွေ စချီတက်နေကျပါ။ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်း သံဃာတော်တွေဆွမ်းကပ်ချိန်လောက်အရောက်သွားရမယ်ဆိုပြီး အိမ်ကနေ ၁၀နာရီခွဲလောက်မှာ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၁ နာရီကျော်လောက်ဘုရားပေါ်ရောက်တဲ့ အချိန်ကျတော့ အရပ်ဝတ်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးတွေကို တန်ဆောင်းတွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မုခ်မှာရှိတဲ့ ကြေးသွန်းကြီးဘုရားကိုသွားဖို့ ဆင်းလာတာ လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်ချိန်မှာတော့ ဟိန်းဟိန်းညံနေတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ တဖြောင်းဖြောင်းတီးခတ်နေတဲ့ လက်ခုပ်သံတွေကိုစကြားရပါတော့တယ်။တပ်ဦးထိပ်မှာတလူလူလွင့်နေတဲ့ သာသနာ့အလံတွေနဲ့အတူ သံဃာတော်တွေ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တက်လာကြပါပြီ။ ၀မ်းမြောက်ပီတိဖြစ်တဲ့စိတ်၊ တက်ကြွဆူဝေလာတဲ့သွေးတွေနဲ့အတူ လက်အုပ်ချီကန်တော့လိုက် ၊ လက်ခုပ်တီးအားပေးလိုက်နဲ့ တစ်ယောက်ထဲအလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပါပဲ။
သံဃာတော်တွေကျော်ဖြတ်သွားပြီးချိန်မှာတော့ အနောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့လူပရိတ် သတ်တွေထဲ ၀င်ပူးပေါင်းပြီးဘုရားပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်။ လူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။ တို့မေတ္တာစွမ်းကမ္ဘာလွှမ်း အေးချမ်းကြပါစေဆိုတဲ့ သံပြိုင်ကြွေးကြော်သံတွေဟာ ကြားရသူအပေါင်းကို ကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထမတတ်ပါပဲ။ အောင်မြေရှေ့ရောက်ချိန်မှာတော့ သံဃာတော်တွေက အရှေ့ဆုံးမှာ စီတန်းပြီး အနောက်မှာ မယ်သီလရှင်တွေ ၊ နောက် လူပရိတ်သတ်တွေဟာ ညီညီညာညာစီတန်းပြီး ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ အောင်မြေတစ်ခုလုံးလည်းပြည့်ကျပ်နေပါပြီ။ ဦးဆောင်ဆရာတော်တွေ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်လို့အပြီးမှာတော့ အားလုံးဟာ နမောဿတ အစချီလို့ ဘုရားရှိခိုးကြပါတယ်။
ဒီ့နောက် ဆရာတော်တစ်ပါးက ]ဦးဇင်းတို့ ဒီနေ့ မြေနီကုန်း၊ အဲဒီ့ကနေလှည်းတန်း နောက်တံတားဖြူဘက်က နေကမ္ဘာအေးဘုရားကိုချီတက်မယ်လို့ ကြော်ငြာလိုက်ချိန်မှာတော့ လူအပေါင်းက သောင်းသောင်းဖျဖျ
ချီတက်ပွဲစပါပြီ။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာတင်ပဲ သုံးဦးစီတွဲပြီး စီတန်းလိုက်ကြပါတယ်။ကျွန် တော်အပါအ၀င် တခြားလူကြီးလူငယ်တွေကလည်း သံဃာတော်တွေရဲ့ဘေးမှာ လက်ချင်းချိတ်ကာရံလို့ လိုက်ပါလာကြပါတယ်။ ဒါဟာ သတင်းစာတွေထဲမှာပုတ်ခတ်ထားသလိုအတွင်းကလူတွေအပြင်ပြန်ထွက် လို့မရအောင် ၀န်းရံပိတ်ဆို့ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်က အန္တရာယ်တွေအတွင်းကိုဝင်မလာနိုင် အောင် ကာရံပေးထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြော ရှေ့ဘက်မုခ်ဆီမှ ချီတက်လာခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော်များနဲ့ ပြည်သူအပေါင်းတို့ဟာကမ္ဘာအေးဘုရားဆီချီတက်ဖို့အတွက်အရှေ့ဘက်မုခ်ကနေ ပြန်ဆင်းလို့လာခဲ့ပါပြီ။ တနည်းပြောရရင် မြန်မာပြည်သူတွေအိပ်မက်သစ် မက်နိုင်ဖို့အတွက် မနက်ဖြန်ရဲ့တံခါးတွေကိုရိုက်ချိုးဖို့ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ချီတက်လာခဲ့ကြပါပြီခင်ဗျား။
ကျွန်တော်တို့တွေလည်း အရှေ့ဘက်မုခ်ကနေ တည့်တည့်ဆင်းလာကြပြီး ဗဟန်းဈေးအရောက်မှာ ဘယ်
ဘက်ကိုချိုးကွေ့လို့ ရေတာရှည်လမ်းဟောင်းအတိုင်းချီတက်လာကြပါတယ်။ လမ်းဘေးဝဲယာမှာရှိကြတဲ့ ပြည်သူလူထုတော်တော်များများကလည်း လက်ခုပ်တွေတီးပြီးအားပေးကြတာသောင်းသောင်းဖျဖျပါပဲ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမပါဝင်နိုင်ပေမယ့် လက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးဖေါ်ရတာကို
ကျွန်တော်တို့ရင်မှာ အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ကြည်နူးရပါတယ်။ ခြောက်လုံးလှန့်လုံးတွေကြောင့် တီးရတာ
မဟုတ်တဲ့ ၊ ဘာပယောဂမှမပါဝင်တဲ့ လက်ခုပ်သံစစ်စစ်ဆိုတာကို အဲဒီ့အချိန်ကတီးခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံး
ရေတာရှည်လမ်းဟောင်းကနေထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီးေ ပ်ါရောက်သွားပါတယ်။ အရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့ဦးဆောင်သံဃာတော်များဟာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ရပ်လို့ မေတ္တာပို့ ပေးပါတယ်။ မေတ္တာပို့ပြီးလို့ သံဃာတော်တွေကျော်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်များဆိုတဲ့ နဖူးစည်းနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလံတွေကို ကိုင်စွဲပြီး ၀င်ရောက် ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်။ သံဃာ၊ ကျောင်းသား ၊ လူထုနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များပါဝင်တဲ့ ဆန္ဒပြအစု အဝေးကြီးဟာ အားရစရာကောင်းလောက်အောင်ကို ကြီးထွားလာခဲ့ပါပြီ။
မြေနီကုန်းဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့  ဘယ်မှာ အစ၊ ဘယ်မှာအဆုံးဆိုတာကို
လှမ်းမျှော်ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။ခရီးရှည်လာတာနဲ့အမျှလူပရိတ်သတ်အပေါင်းကိုလည်းပုံစံအမျိုး မျိုးနဲ့ တွေ့လာရပါတယ်။ သံဃာတော်တွေကြွလာတာကိုမြင်တွေ့ရလို့ကိုယ်ပိုင်ကားကို ရပ်ပြီး ကားထဲက ဆင်းကန်တော့တဲ့လူတွေကိုတွေ့ရသလို၊ သင်တန်း ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းကနေကြုံကြိုက်လို့လိုက်လံအားပေး နေသူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ထို့အတူပါပဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲလက်ခုပ်တီးအားပေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ
ကို တွေ့ရသလို၊ မတုန်မလှုပ်ရပ်နေကြတဲ့ အမျိုးသားတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေ
ကိုးထပ်ကြီးဘုရားရှေ့မှာလည်း သံဃာတော်တွေဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါသေးတယ်။ လိုက်ပါလာတဲ့ သံဃာနဲ့ လူဦးရေတွေအရမ်းများလာတဲ့အတွက် သုံးဦးစီကနေ ငါးဦးတစ်တွဲစီတွဲလို့စီတန်းပေမယ့်လည်း ရှည်လျားနေဆဲပါပဲ။ သံဃာတော်တွေဟာ ဗားကရာလမ်းအတိုင်းတည့်တည့်သွားလို့ ကမ်းနားလမ်းအရောက်မှာတော့ ညာဘက်ကိုချိုးလို့ လှည်းတန်းဘက်ဆီဆက်လက်ချီတက်နေပါတယ်။
အားလုံးဟာစည်းကမ်းရှိရှိနဲ့စနစ်တကျချီတက်နေတာပါ။ ဖိနပ်ပေါက်သူတွေကို ပလာစတာ ၊ မူးမော်သူတွေကို ဆေးဂွမ်းလိပ်၊ ညောင်းညာကိုက်ခဲလာသူတွေအတွက် ပရုပ်ဆီ စသဖြင့် လိုလေသေးမရှိရအောင် ဆေးအဖွဲ့က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စေတနာရှင်တွေကလည်း သောက်ရေသန့်၊ သကြားလုံး၊ ဆေးလိပ်နဲ့ ကွမ်းယာပါမကျန်ရအောင် လိုက်လံဝေငှပေးနေပါတယ်။
ကမ်းနားလမ်းမတစ်လျှောက်လုံးလည်း ပြည့်ကျပ်နေပါပြီ။ အဝေးပြေးကုန်းဆင်းနားက ရဲစခန်းရှေ့ မှာလည်းသံဃာတော်တွေရပ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးကြပါသေးတယ်။ ရဲစခန်းကြီးကတော့ ၀င်းတံခါးတွေပိတ်လို့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပါပဲ။ လူအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
လှည်းတန်းလမ်းဆုံကိုရောက်တော့ ပြည်လမ်းမပေါ်ကို ချိုးကွေ့လိုက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့
မေတ္တာပို့သံတွေကိုကြားရတဲ့အခါ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာ စာမေးပွဲဖြေနေကြတဲ့ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား
တွေဟာ စာမေးပွဲဆက်မဖြေကြတော့ပဲ ကျောင်းထဲကထွက်ပြီး လိုက်လာကြပါတယ်။ သံဃာတော်တွေဟာ
အင်းလျားကန်ရှေ့ တံတားဖြူကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ၈၈ တုန်းက ဒီတံတားဖြူမှာကျဆုံးသွားကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရည်စူးအာရုံပြုလို့မေတ္တာပို့ပေးပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာတော့ မိုးကောင်းကင်နဲ့အပြိုင် မှိုင်းညှို့လို့ပေါ့။
တံတားဖြူကနေ ရှစ်မိုင်ဘက်ကိုဆက်လက်ချီတက်လာချိန်မှာ မိုးကတဖွဲဖွဲကျနေပါတယ်။ အနှောက်အယှက်မရှိ ချီတက်နိုင်တာကြောင့်ရော ၊ လိုက်ပါအားပေးသူ အရမ်းများပြားလွန်းတာကြောင့်ပါ ( ခန့်မှန်းခြေ တစ်သိန်းခွဲ၊ နှစ်သိန်းလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။ ) အားလုံးဟာပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။ ဒီလောက်လူအင်အားနဲ့ ဒီလိုညီညွတ်မှုမျိုးဟာ ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။ ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံရောက်တော့ ကမ္ဘာအေးဘုရားဘက်ကိုချိုးကွေ့လို့ ဆက်လက်ချီတက်ကြပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရပြောရရင် တစ်လမ်းလုံးတောက်လျှောက်လက်ချင်းချိတ်လာတဲ့အတွက် လက်မောင်းတွေ နာနေပါ ပြီ။ ဒူးဆစ်တွေလဲ ကိုက်နေပါပြီ။ နောက်ဆုံး ဘေးကနေ လိုက်လာတဲ့လူတွေအရမ်းများတာကြောင့် လက် ချင်းချိတ်ထားတာတွေကိုလဲ ဖြုတ်လိုက်ကြပါတယ်။ မေတ္တာပို့လိုက်၊ လက်ခုပ်တီးလိုက် ၊ ကိုယ့်ဘေးနားက လူနဲ့ စကားပြောလိုက် နဲ့ ချီတက်လာကြတာ ကမ္ဘာအေးဘုရားကိုရောက်လာပါတယ်။ဘုရားကိုရောက်တော့ သံဃာတော်တွေက ဘုရားပေါ်တက်သွားကြပြီး လူတွေက ဘုရားခြေရင်းမှာ အသီးသီးစောင့်နေကြပါတယ်။ လမ်းမကြီးဘေးက ဆိုင်တွေလည်း ရေသန့်ဘူးတွေလက်မလည်အောင် ရောင်းရတာ ပစ္စည်းပြတ်သွားတဲ့ အထိပါပဲ။ အချိန်ကတော့ ညနေ ငါးနာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီ။ တော်တော်ကြာတော့မှ ဆန္ဒပြပွဲကို ဒီနေရာမှာ ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ မနက်ဖြန်ကို ရွှေတိဂုံဘုရားမှာပဲဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကြေ ငြာသံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေမှာ အဆင်ပြေသလိုထိုင်နေကြတဲ့လူထုကြီးဟာ အဲဒီတော့မှ ကျေနပ်အားရစွာ အသီးသီးလူစုခွဲလိုက်ကြပါတော့တယ်။
၂၅ ရက်နေ့မှတော့ ဘုရားပေါ် ကျွန်တော်မသွားဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်ဆူးလေကို ရောက်လာမလဲလို့ နားစွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ ။ နေ့လည် ၂နာရီကျော်လောက်မှာ ဆူးလေကို ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အသံကြားတာကြောင့် ချက်ချင်းလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။ ဆူးလေကိုရောက်တော့ လူစု လူဝေးကြီးကတိုးမပေါက်အောင်ပါပဲ။ အားလုံးဟာ ငြိမ်သက်စွာထိုင်လို့ သံဃာတော်တွေရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို နားစိုက်ထောင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအရမ်းများတာကြောင့် သဲသဲကွဲကွဲမကြားရပါဘူး။ သံဃာတော် အချို့နဲ့လူအချို့စကားပြောအပြီးမှာ ဆက်လက်ချီတက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ မမြင်တွေ့ရတာ အတော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံကို ပြန်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများသမဂ္ဂဆိုတဲ့နဖူးစည်းနဲ့အတူ ]]ဗကသ}} ပြန်လည်မွေးဖွားလာခြင်းပါပဲ။
၁၉၃၆ ခုနှစ်က ( အမှတ်မှားရင်ပြင်ပေးကြပါ။) ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးနဲ့အတူ မွေးဖွားလာ ခဲ့တဲ့ ]]ဗ.က.သ}} ဟာ မီးပုံအတွင်းကနေ ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်လာတဲ့ ဖီးနစ်ငှက်လိုပါပဲ။ အခုလည်း မုန်တိုင်းကြားကနေ တဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားလာခဲ့ပါပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ လူတွေကလည်း ကျောင်းသားတွေကို လက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးကြပါတယ်။
မြို့တော်ခမ်းမရှေ့ကနေထွက်ခွာချိန်မှာ ကျွန်တော်လည်း သံဃာတော်တွေရဲ့ဘေးကနေ လက်ချင်းချိတ်ပြီး လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ မဟာဗန္ဓုလလမ်း အတိုင်းချီတက်လာကြတာပါ။ လမ်းဘေးမှာရပ်ကြည့်ရင်း လက်ခုပ်တီးအားပေးတဲ့လူတွေ၊ တိုက်ခန်းဝရံတာတွေပေါ်ကနေ လက်ခုပ်တီးအားပေးနေတဲ့လူတွေ၊ ရပ်ကြည့် နေရာက စိတ်ဓါတ်တွေတက်ကြွလာပြီး ၀င်ရောက်လိုက်ပါလာတဲ့လူတွေ ။ မြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးဟာ အပေါင်း လက္ခဏာတွေချည်းပါပဲ။ သိမ်ဖြူလမ်းကိုရောက်တော့ ဘယ်ဘက်ကိုချိုးပြီး သိမ်ဖြူလမ်းတောက်လျှောက် ဆက်လက်ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။ သာသနာ့အလံတွေ၊ ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေ၊ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင်ကြီးချီတက်လာကြတာ သိမ်ဖြူကုန်းတံတားကိုကျော်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ဒူးတွေဟာ မနေ့က အရှိန်နဲ့ ပေါင်းပြီး အနှုတ်လက္ခဏာပြလာတာကြောင့် ဆက်မလိုက်နိုင်တော့ပဲ နေခဲ့ရပါတယ်။ တရွေ့ရွေ့ဝေးကွာသွားတဲ့ ရဲဘော်အပေါင်းကိုငေးရင်း အရေးတော်ပုံကြီးအတွက် ကျေနပ်အားရတဲ့ပီတိနဲ့ ဆက်မလိုက်နိုင်တော့လို့ ခံစားရတဲ့ဝမ်းနည်းမှု နှစ်ခုပေါင်းပြီး အီလည်လည်ကြီး ဖြစ်ရပါတယ်ဗျာ။
ဆူးလေဘုရားလမ်းပေါ်မှာလည်းအခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဆူးလေဘုရားလမ်း အတိုင်း ဆူးလေဘုရားဘက်ဆီ စစ်ကားများဟာ အပြင်းမောင်းချလာပါတယ်။ မရှေးမနှောင်းပဲ ဗိုလ် ချုပ်လမ်းကနေ ဆူးလေဘုရားဆီ နောက်ထပ်စစ်ကားတွေ အပြင်းမောင်းလာသလိုသေနတ်သံတွေလဲဆက် တိုက်ထွက်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း လမ်းသွယ်တစ်ခုထဲဝင်ပြေးခဲ့ပါတယ်။
အခြေအနေနည်းနည်းငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကို အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သာသနာ့အလံတွေနဲ့ သံဃာတော်တွေ အပြင် ခွပ်ဒေါင်းအလံ တွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအပါအ၀င် ဆန္ဒပြသူတွေချီတက်လာလို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ သူတို့ ချီတက်ရာနောက်ကို လိုက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ သိမ်ကြီးဈေးထောင့်က လူကူးကုန်းကျော်တံတားအောက်မှာ အားလုံးထိုင်နားကြပြီး သံဃာတော်တွေကအချင်းချင်း တိုင်ပင်ပါတယ်။ နောက်တော့ သံဃာတော်တွေဟာ
မေတ္တာသုတ်ကို ရွတ်ဖတ်ကြပါတယ်။ အားလုံးသောသံဃာတော်တွေဟာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကိုခံလာရတာရော၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာတာကြောင့်ပါမျက်နှာတွေညှိုးငယ်နေပါ တယ်။ သံဃာတော်တွေရွတ်ဆိုပြီးချိန်မှာ
ရှေ့ကိုဆက်လက်ချီတက်ကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးလမ်းအရောက်မှာ ညာဘက်ကိုချိုးလို့ ကားမှတ်တိုင်ရှေ့လမ်း ပေါ်မှာပဲ အားလုံးထိုင်ကြပြန်ပါတယ်။ အချိန်က ၃နာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီ။
ဒီကနေ့ ကျုပ်တို့ အရှေ့ဘက်မုခ်မှာ စစ်တပ်ရဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ စစ်တပ်က မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ပစ်တယ်၊ နောက် ၀ါးရင်းတုတ်တွေနဲ့ ၀င်ရိုက်တယ်။ ဟောသည့်မှာ ကျုပ်ခေါင်းပေါ်မှာ သူတို့ရိုက်ထားတဲ့ ဒါဏ်ရာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကိုမကြောက်ဘူးဆိုတာပြရအောင်မနက်ဖြန် နေ့လည် ၁၂နာရီ ဘုရားမှာစုလို့မဖြစ်တော့တဲ့အတွက် ငါးထပ်ကြီး၊ ခြောက်ထပ်ကြီးနဲ့ရွှေဂုံတိုင် တစ်လျှောက် အရောက်လာခဲ့ကြပါ။ ဘယ်လိုလဲ လာကြမှာလား။ လာပါ့မယ်ဘုရာ့ ၊ လာကြ မှာလား၊ လာပါ့မယ်ဘုရာ့ ၊ လာကြမှာလား၊ လာပါ့မယ်ဘုရာ့ ။
သံဃာတော်တစ်ပါးက လက်တစ်ဖက်က လက်ကိုင်စပီကာကိုကိုင်၊ ကျန်လက်တစ်ဖက်ကခေါင်းက ဒါဏ်ရာကို ပြရင်း လူထုထဲဝင်လို့ တရားဟောနေတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါလျက် သံဃာ့သွေးတွေ စွန်းထင်းခဲ့ရလို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့ပြန်ဖြေ သံဟာ မြေကြီးသိမ့်သိမ့်တုန်မတတ်ပါပဲ။ တရားဟော ပြီးသွားတော့ အချိန်လင့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ပဲလူစုခွဲလိုက်ကြပါ တယ်။
စက်တင်ဘာအရေးတော်ပုံအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် နှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ပိုင်းက သံဃာတော်များရဲ့ စတင်ဦးဆောင်မှုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ ကျောင်းသားလူငယ်များရဲ့ ဆက်လက် ဦးဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သံဃာတော်တွေဟာ ဒီအရေးတော်ပုံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် စတင်လှုံ့ ဆော်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ အကြောက်တရားအားကြီးနေတဲ့လူထုကို လမ်းမတွေပွေက်လာရဲအောင် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ကနေ ၂၆ ရက်နေ့အထိက သံဃာတော်တွေအကောင်း ဆုံးဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။ ၂၇ ရက်နေ့မှာတော့ သံဃာတော်အင်အားက ဆယ်ဂဏန်းလောက်ပဲရှိပြီး ကျောင်း သားအများစုက စတင်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။ ၂၈ နဲ့ ၂၉ ရက်တွေကိုတော့ ကျောင်းသားတွေချည်းပဲ ဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဒီခေတ်လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးစိတ်မ၀င်စားတော့ဘူးလို့ ထင်ထားသမျှကို ခြေဖျက်ပြ လိုက်ခြင်းပါပဲ။
၂၇ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီခွဲ လောက်မှာ သံဃာတော်ဆယ်ပါးလောက်နဲ့ ကိုရင်တွေအပါအ၀င် ကျောင်းသားတွေဦးဆောင်လာတဲ့အဖွဲ့ဟာ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ ထိုမှတဆင့် လမ်းမတော်လမ်းအတိုင်းချိုးကွေ့ပြီး မဟာဗန္ဓုလလမ်း ကိုဆင်းချလာပါတယ်။ မဟာဗန္ဓုလလမ်းကိုရောက်တော့ ဆူးလေဘက်ကိုချိုးကွေ့ လိုက်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူဦးရေလည်းများပြားလာပါပြီ။
လသာလမ်းထိပ်ကိုဖြတ်တော့ လမ်းထဲကရဲစခန်းရှေ့ လမ်းမပေါ်မှာ လုံထိန်းတွေရင်ဘောင် တန်းပြီးရပ်နေတာတွေ့ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းကိုရောက်တော့ကမ်းနားလမ်းဘက်ကိုချိုးကွေ့လိုက်ပေ မယ့် ဆက်မချီတက်ဖြစ်သေးပါဘူး။ အနော်ရထာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တခြားကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ နဲ့ပူးပေါင်း ဖို့အပေါ်ဘက်ကိုချီတက်ကြမလား၊ အောက်ဘက်ကိုဆက်ဆင်းပြီး ကမ်းနားလမ်းအတိုင်းချီတက်ကြမလားဆို တာကို ညှိနှိုင်းကြပြီး နောက်ဆုံး အပေါ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်တက်လာကြပါတယ်။
အနော်ရထာလမ်းပေါ်က သိမ်ကြီးဈေးကုန်းတံတားအောက်ကိုရောက်တော့ သံဃာတော်များပြန် ကြွရတော့မှာဖြစ်လို့ လူစုခွဲကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားတွေနဲ့ လူထုအများစုက လူစုမခွဲချင်ကြပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သံဃာတော်များကို အငှားကားစီစဉ်ပေးလိုက်ပြီး ကျောင်းသားများနဲ့လူထုက တော့ အနော်ရထာလမ်းအတိုင်း ကျုံးကြီးဘက်ကို ဦးတည်ကာချီတက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲမှုများ ကြားကနေ ဒီလိုချီတက်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုအပေါင်းကလဲသောင်းသောင်းဖျဖျပါပဲ။
ကမ္ဘာမကြေ သီဆိုသံတွေ၊ လက်ခုပ်သံတွေဆိုတာလည်း အဆက်မပြတ်ပါပဲ။ ကျုံးကြီးထိပ်ကိုရောက်တော့ ကမ်းနားလမ်းမအတိုင်းအဝေးပြေးဘက်ကိုဦးတည်လိုက်ကြပါတယ်။ရှေ့ဆုံးကကျောင်းသားလေးတွေဦးဆောင်တဲ့အတိုင်းချီတက်ေ နကြတာပါ။ ချီတက်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာ ယောကျာင်္း၊ မိန်းမအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးပါဝင်ပါတယ်။ အားလုံးဟာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ။
သီရိမင်္ဂလာဈေးကိုဖြတ်တော့ ဈေးသူဈေးသားတွေဟာ လမ်းဘေးဝဲယာတစ်လျှောက်မှာသာမကပဲ၊ ဈေးအထပ်ထပ်က ၀ရံတာတွေမှာပါပြည့်ကျပ်နေအောင်အားပေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချီတက်လာကြ တဲ့ လူအင်အားဟာ တစ်သိန်းလောက်တော့ရှိမှာပါ။ ဒီလိုအင်အားမျိုးနဲ့ လှည်းတန်းအထိချီတက်နိုင်ရင်မဆိုးဘူး လို့တောင်စိတ်ကူးမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးက စိတ်ကူးပါပဲ။ နတ်စင်လမ်းနားအရောက်မှာတော့ အဲဒီ့မှာစတွေ့တာပဲ လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ချီတက်နေရင်းကနေ နောက်ဆုံးကလိုက်လာတဲ့လူတွေဟာ ]] လာပြီ လာပြီ ဆိုပြီး ၀ုန်းကနဲ ၀ရုန်းသုန်းကားနဲ့ထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်။
အခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပြီး စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ။ ကွန်တိန်နာကားကိုတွေ့လို့ အလန့်တကြားတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပါ။ ဒါနဲ့ချက်ချင်းလူပြန်စုပြီး သာဓုကျောင်းတိုက်ရှေ့ကိုချီတက်ကြပါတယ်။ ကျောင်းတိုက်ရှေ့ရောက်တော့ အားလုံး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် လက်အုပ်ချီပြီး နမောဿတ အစချီလို့ဘုရားရှိခိုးပြီး မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာပို့ကို ရွတ်ဆိုကြပါတယ်။
ဒီသာဓုကျောင်းတိုက်ကသံဃာတစ်ပါး ဟာ စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မနေ့က (၂၆ ရက်နေ့) ကျဆုံးသွားတာကြောင့် ထိုသံဃာတော်ကိုရည်စူးပြီး ဘုရားရှိခိုး၊ မေတ္တာပို့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မေတ္တာပို့
ရင်းနဲ့ ငိုနေတဲ့လူတွေရှိသလို အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်းဝမ်းနည်းနေကြပါတယ် ။ မေတ္တာပို့ပြီးလို့ ဆက်လက်ချီတက်ဖို့ပြင်နေတုန်းမှာပဲ နောက်တစ်ကြိမ်အလန့်တကြားထပ်ဖြစ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း
ထဲ ၀င်ပြေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း မပြေးကြဖို့ မကြောက်ကြဖို့ အော်ဟစ်ပြီးထိန်းပေမယ့် ထိန်းမရတဲ့ အတွက် ဒေါသ တွေဖြစ်နေကြရပါတယ်။ ဒီလိုကြောက်ပြနေသ၍ သူတို့ဘက်ကဖြဲခြောက်နေမှာပါပဲ။
အားလုံးနီးပါးထွက်ပြေးကုန်ကြတာကြောင့် ကျောင်းသားလေးတွေနဲ့ လူအနည်းငယ်ကလွဲရင် လူအင်အားသိပ်မရှိတော့ ပါဘူး။ ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲ ရှေ့ကိုဆက်တက်လာကြတော့ အဝေးပြေးကားမှတ်တိုင်လောက်မှာ စစ်သားတွေလမ်းပိတ်ထားကြပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့လည်း လူစုမခွဲပဲ နေရာမှာတင်ရပ်ပြီးအခြေအနေကို အကဲခတ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူစုမခွဲတဲ့အတွက်သူတို့တွေဟာသေနတ်တွေချိန်ပြီးရှေ့ကို တိုးလာကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး သူတို့တွေက မိုးပေါ်ကိုထောင်ပြီး ဆက်တိုက်ပစ်ပါတော့ တယ်။ ပစ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီ လျှောက်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့လည်း ရပ်ကွက်ထဲဝင်ပြီးလူစုခွဲလိုက်ကြရပါတော့တယ်။ လူစုမခွဲခင်မှာ မနက်ဖြန် နေ့လည် ၁ နာရီ လမ်း ၃၀ ထိပ်မှာ ဆုံကြမယ်လို့ ကြေငြာလိုက်ပါသေးတယ်။
၂၈ ရက်နေ့ဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ယုန်တောင်ပြေး ခြင်္သေ့မြောက်လိုက် ဖြစ်ရတဲ့နေ့ပါပဲ။ (ဟိုအကောင်ကိုတော့မသုံးပါရစေပါနဲ့ခင်ဗျာ။)အဖွဲ့တွေနောက်ကိုပတ်ရှာနေရင်းနဲ့ကို လမ်းကြောင်းတွေ လွဲပြီး တောင်တခြားမြောက်တခြားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဘာဆို ဘာမှကို မဘာလိုက်ရတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။
အဲဒီ့နေ့ကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကို ပြန်ပြီးတော့ဖောက်သည်ချရမယ်ဆိုရင် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်နဲ့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ထဲမှာ စစ်ကားတွေဟာအဆက်မပြတ် ကင်းလှည့်နေပါတယ်။ ရှေ့ဆုံးမှာတော့ ကား တစ်စီးကလော်စပီကာကြီးနဲ့ လူငါးဦးထက်ပိုမစုဖို့ ၊ ဆူပူသူတွေကို (ဒါကတော့သူတို့အသုံးအနှုံးပါ ) လိုက် လံဖမ်းဆီးတဲ့အခါ ရပ်ကွက်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ အိမ်ထဲမှာ လက်ခံမထားဖို့၊အကယ်၍
အိမ်ထဲကိုဝင်စစ်လို့ သန်းခေါင်စာရင်းဝင်မဟုတ်တဲ့လူများကိုတွေ့ရင် အိမ်ရှင်ကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေး
ယူမယ်ဆိုတာတွေကို အော်ဟစ်ကြေငြာနေပါတယ်။ သူ့နောက်မှာကတော့ စစ်သားအပြည့်တင်ထားတဲ့စစ်
ကားငါးစီး (အထက်) လောက်က လိုက်ပါလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပြည်သူ့အချစ်တော်စွမ်းအားရှင်
တွေကိုတင်ထားတဲ့ ဒိုင်နာကားနဲ့ ဟိုင်းလပ်စ်ကားတွေပါလာပါတယ်။
အနော်ရထာလမ်းပေါ် ၊မောင်ထော်လေးလမ်းထိပ်လောက်မှတော့ စစ်သားတွေရင်ဘောင်တန်းရပ်နေ ပါတယ်။ ဆယ့်တစ်နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ အနော်ရထာလမ်းပေါ်က ရွှေဘုံသာလမ်းမီးပွိုင့်ထောင့်တွေမှာလူငယ်တွေစုပြီး အော်နေကြပါပြီ။ အော်လို့မှသိပ်မကြာသေးပါဘူး ။ စောစောကပြောတဲ့ စစ်ကားတန်းတွေရောက်လာတဲ့အတွက် လူစုခွဲလိုက်ရပါတယ်။ ကားတန်းကြီးဟာ လမ်းအတည့်မောင်းလိုက် ၊ပြောင်းပြန် မောင်းလာလိုက်နဲ့ လူပြန်စုချိန်မရလောက်အောင် လှည့်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဟိုလမ်းဝင်ဒီလမ်းထွက်နဲ့ နေ့လည်နှစ်နာရီထိုးသွားပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်လောက်
မှာမှ ကမ်းနားဘက်မှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချီတက်နေကြတယ်လို့ ပြောသံကြားတာကြောင့် အမှီလိုက်ပေမယ့် အရိပ်
ဆယ့်တစ်နာရီလောက်မှာ လူတွေဟာ အရှိုရှိုထွက်လာလိုက်ကြတာ ကားလမ်းအပြည့်ပါပဲ။ လူလည်းစုမိရော
ထုံးစံအတိုင်းအော်ကြပါတယ်။ အော်နေရင်းနဲ့လည်း မနေ့ကလို စစ်ကားတွေရောက်လာမှကို ကြည့်နေရပါ
သေးတယ်။ ခဏနေတော့ လူအုပ်ကြားထဲကနေ လက်မောင်းမှာ၊ နဖူးမှာ ပိတ်စအနီလေးတွေပတ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေ ထွက်လာကြပါတယ်။ တချို့တွေက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ပုံတော်ကို ကိုင်ဆောင်ထားလို့၊
တချို့ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ပုံကို ကိုင်ဆောင်ထားလို့ပါ။ သနားစရာတစ်ခုကတော့ သူတို့မှာ
ကျောင်းသားတို့ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံမရှိခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ခွပ်ဒေါင်းအလံအစား
အနီရောင်ပိတ်စတစ်စကို အလံလိုလွှင့်ထူထားပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အခုအချိန်မှာ ဒါဟာ အားလုံး အတွက်ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ပါပဲ။
ကျောင်းသားလေးတွေဟာ အဲဒီ့နေရာမှာ ကြွေးကြော်သံတွေတိုင်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့
ကျောင်းသားတွေနဲ့ လူထုဟာ ရွှေဘုံသာလမ်းအောက်တည့်တည့်ကိုချီတက်သွားကြပါတယ်။ ဖိနှိပ်မှုတွေ
ကြားထဲကလူထုဟာ လက်ခုပ်မတီးရဲလောက်အောင်တော့ မကြောက်ကြသေးပါဘူး။ ရွှေဘုံသာလမ်းအောက်
ဘလောက်ကိုရောက်တော့ အပေါ်ဘက်ကိုပြန်တက်လာကြပြန်ပါတယ်။ အနော်ရထာလမ်းပေါ်ပြန်ရောက်လာ
တော့ ဘယ်ကိုမှဆက်မချီတက်တော့ပဲ ကြွေးကြော်သံတွေပဲအော်ဟစ်နေကြပါတယ်။
အော်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲ ရွှေဘုံသာလမ်းထဲကိုစစ်ကားတွေအပြင်းမောင်းဝင်လာတဲ့ အတွက် အကုန်ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ တွေ့ရာလမ်းတွေထဲ ၊ တွေ့ရာဆိုင် ၊ တွေ့ရာအိမ်ထဲ ၀င်ပြေးကြရတာ
ပါ။ ကျွန်တော်လည်းလွတ်ရာတစ်နေရာကို ပြေးရပါတယ်။ ]]ပြေး ၊ ပြေး ၊ ပြေး}} ကိုယ့်ဘာသာအားပေးရင်း
တစ်နေရာမှာ ၀င်ပုန်းနေလိုက်ရပါတယ်။ စစ်သားတွေကလည်း ကားရပ်တာနဲ့ချက်ချင်းဆင်းပြီး မည်းမည်း
မြင်ရာအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖမ်းတာပါ။ လမ်းတွေထဲဝင်ပြေးရင် လမ်းတွေထဲအထိလိုက်ပါတယ်။ တိုက်ခန်း
လှေခါးတွေထဲ ၀င်ပြေးတဲ့လူတွေကိုလည်း လိုက်ဖမ်းပါတယ်။မိသွားတဲ့လူတွေလည်းမနည်းပါဘူး။ဘေးကင်း လောက်ပြီလို့ ယူဆရတဲ့အချိန်ကျမှပဲပုန်းနေရာကထွက်ပြီး အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ရကြောင်းပါခင်ဗျား။
(ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခဲ့သူ ခွန်း (khoon) ရဲ့စက်တင်ဘာမှ သဲတစ်ပွင့်များ ကို ပြန်လည်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်)။
Posted by Ko Niknayman at 7:27 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 7:49 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:41 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:15 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 4:12 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:30 PM Links to this post